HomeWararka Ciyaaraha MaantaManchester United oo xiiseyneysa ciyaaryahanka Arsenal Ainsley Maitland-Niles
May 13, 2021 Wararka Ciyaaraha Maanta, Horyaalka Ingiriiska, Suuqa kala iibsiga 0
Manchester United ayaa lagu soo waramayaa inay xiiseyneyso ciyaaryahanka khadka dhexe ee Arsenal Ainsley Maitland-Niles , kaasoo qeybtii labaad ee xilli ciyaareedka amaah kula qaatay West Bromwich Albion .
23 jirkaan ayaan wali wax gool ah u dhalin kooxda Sam Allardyce 12kii kulan ee Premier League ee uu u ciyaaray Baggies, laakiin waxa uu soo jiitay xiisaha Red Devils ka dib qaab ciyaareedkiisii ​​guud.
Maitland-Niles ayaa inta badan kubbadiisa khadka dhexe ugu ciyaaray West Brom xilli ciyaareedkan laakiin waa xiddig qaab ciyaareed fiican soo bandhiga maadama uu sidoo kale ka ciyaari karo daafaca garabka midig.
Sida laga soo xigtay The Mirror , Man United waxay jeclaan laheyd Maitland-Niles.
Xiddiga reer England ayaa 21 kulan u saftay Gunners tartamada oo dhan xilli ciyaareedkan ka hor inta uusan u dhaqaaqin West Midlands suuqii jiilaalka, laakiin mustaqbalkiisa Emirates ma cadda.
Maitland-Niles oo akadeemiyada Arsenal ka soo qalin jabisay, wuxuuna kulankiisii ​​ugu horreeyay u saftay kulankiisii ​​ugu horreeyay ee 2014, isagoo u safray 121 kulan oo kooxda ah tan iyo markaas.